PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-12-23 - Ningayiqedi imali otshwaleni
Ningayiqedi imali otshwaleni
Isolezwe ngeSonto - 2018-12-23 - IMIBONO -
Njengoba sisesikhathini sikaNcibijane kuningi ukujabula okukhona njengenjwayelo. Izikole zivaliwe nabasebenzi baphumulile ngaphezu kwalokho cishe iningi labasebenzi lithole imali ethe xa xa emsebenzini, le ebizwa ngebhonasi, kuphinde kube neningi labantu ebelidlala izitokfela unyaka wonke esebephunyelwa izimali okanye ukudla nokunye nokunye.
Kulesi sihloko angikhulumi ngokuphuza utshwala ngikhuluma ngokuphuza utshwala ngokweqile lapho ugcina usuwumlutha ongakwazi ukuphila ngaphandle kotshwala kepha nakhona ungakabi iyona kuqala ngokuphuza uze ungakwazi ukuzibamba.
Ukuphuza ngokweqile kuqale kube yinkinga emakhaya, uthole ubaba okanye umama wekhaya eshiya ekhaya kungadliwe noma izingane zinganakekeliwe ngoba efuna ukuyophuza, adele ikhaya nomndeni ngenxa yatshwala.
Izingane lezo zigcina sezingasazi zibheke kephi ezinye zize zithole usizo komakhelwane ngoba abazali abazinakekeli.
Kungagcini lapho abanye abazali baguqula imizi yabo kube indawo amajoyinti ngoba kuhlale kuphuzwa khona.
Kuqala lapho ukuvuleleka umnyango wokuthi lamadoda aphuzile adlwengule izingane ngoba nomzali/abazali abazinakile okuyinto evamisile ukwenzeka emakhaya amaningi aselahlekelwe isthunzi.
Akugcini lapho nabazali abajika bethume izingane ezincane utshwala nabo bayazilimaza izingane abanye baze baziphuzise nje impela izingane, ngabe lowomzali uhloseni ngempela ngaleyo ngane?
Kuphinde kube inkinga emphakathini ukuphuza ngokweqile ngendlela exakile, ezindaweni zobumnandi ezihambisana nakho ukuphuza ikhona impela la kuhlale kuliwa khona kuze kuphume nezidumbu imbala uthole ukuthi ayikho nkulu into ebibangwa kuphela nje abantu abahlulwa utshwala.
Nasemigwaqeni baphelile abantu ngenxa yabashayeli abangakwazi ukuziphatha baphuze kuze kweqe.
IKwaZulu-Natal isona sifundazwe esihamba phambili sokufa kwabantu selokhu kuqalile lenyanga kaDisemba, sebebaningi kakhulu abantu abafee emigwaqweni ngenxa yezingozi zezimoto eziningi zazo zidalwa abashayeli abaphuzile.
Kubuhlungu kakhulu uma wena njengomshayeli ugcina usuzithola engozini abanye bagcina befile ngenxa nje yomuntu ohlulekile ukuzikhuza abone ukuthi sekwanele usephuze ngokweqile.
Okumangazayo ukuthi kulesi sifundazwe yithina esihamba phambili ngokuphuza ngokweqile ngabe yini edala lokho?
Ngiyaye ngizwe abaningi abantu uma ubabuza ukuthi kungani bephuza kangaka bathi ingoba banezinkinga, ukuphuza utshwala kuyabasiza ukuba bakhohlwe yizinkinga.
Ngibona sengathi kuningi ukufundiseka okusadingeka ngalokhu nokufundisa ngokubaluleka kokubhekana nezinkinga zakho zize zixazululeke kunokukhetha ukuphuza. Ngoba uma usuphuze ngokweqile buzophinde buphele utshwala egazini kodwa izinkinga zona azipheli zizoqhubeka zibekhona. Abantu bakithi kumele bazi ukuthi inkinga awuyixazululi ngokuthi ufake enye inkinga phezu kwale onayo. Inkinga yokuqala nje ngokuphuza kuze kweqe ukuthi utshwala buyabiza futhi ugcina ungasathenganga ezinye izinto obekumele uzithenge zikujabulise uthenge bona, abanye bagcina sebengadli bengagezi bengahlali ngisho emakhaya ngenxa yokuthi sebephilela ukuphuza, kuba kubi kakhulu uma umuntu eseze alahlekelwe umsebenzi ngenxa okuthi uthanda ukuphuza.
Ngifise sengathi abantu bakithi bengafunda ukuthi uma sebephuzile bafunde ukuthi akudingi ukuthi uphuze uze ungakwazi ukuhamba ukuze ujabule, phuza kahle okuluingana usuku ushiyele nabanye ngoba utshwala abupheli buyohlezi bukhona. Kulamaholidi asigweme izingozi nokufa kwabantu okungenasdingo ngenxa yenjabulo engayi ndawo..
Uzongithola nalapha: Facebook: Jacinta Zinhle Ngobese
Twitter/Instagram: @ jacintangobese